Torohevitra momba ny tolo-dalàna: Manao ahoana ny mason'ny mainty hoditra SEO sy ny fomba hisorohana izany?
Ny orinasanao dia fivelomanao, ary tsy tokony handray anjara amin'ny zavatra tsy ara-dalàna izay mety hanimba ny lazanao amin'ny aterineto. Ny fampiasana SEO iray dia tsara, saingy tokony ho azonao antoka fa tsy mampiasa tetikady mainty SEO izy mba hametrahana ny tranonkalanao ao amin'ny karoka fitadiavana . Ny iray amin'ireo fahadisoana goavana ataon'ny olona dia ny mandany vola be amin'ny orinasa SEO nefa tsy fantany akory aza raha toa ka mitady fifamoivozana sandoka na hitsikerana ara-dalàna ny tranonkalany.
Michael Brown, mpitarika matihanina amin'ny Semalt , dia mamelabelatra ny fomba hisorohana an'io fahadisoana mampidi-doza io.
Votoatin'ny votoaty sy kapa mainty SEO
Azo antoka ny filazana fa ny votoaty sy ny mainty hoditra SEO dia mifamatotra. Ny votoatin'ny votoaty dia midika fa mampiasa ny lahatsoratra iray ianao nefa tsy manova ny teny sy ny dikany. Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, maro ireo rindrambaiko sy fandaharana no nampidirina izay mahatonga azy ireo ho mora ho an'ny mpanoratra hanodina ny votoaty. Avelao aho hilaza aminao fa fanao mainty SEO izany ary tsy afaka hanome anao ny vokatra iriana. Raha mameno ny teny fanalahidy ianao ary mitsitsy ny votoatiny tsy tapaka, dia misy ny fahafaha-miditra fa ny tranokalanao dia ho voarara na hosazian'ny fiara fitadiavana indrindra Google.
Manga ve ny mainty hoditra SEO?
Maro ny karazan-tsakafon'ny SEO, ary fantatr'ireo manam-pahaizana ny zavatra tokony hatao mba hanatsarana ny karazan-tserasera. Na mampiasa izany ianao amin'ny sehatra fototra na subdomain, ny mainty hoditra SEO dia tsy tsara ny mandeha amin'ny vidiny. Tsy tokony hamorona rindran-damosina tsy misy dikany ianao ary tsy tokony hameno ny teny fanalahidy satria mety handrara ny tranokalanao tsy ho ela.
Tsy tsara ny fanavaozana lahatsoratra
Toy ny fikajiana votoaty, ny fanoratana lahatsoratra dia tsy fanao tsara. Voamarina fa ireo mpianatra dia mandray anjara amin'ny asa an-tsokosoko ary manandrana manoratra lahatsoratra maro ho an'ny vola. Tsy mahalala akory ny fomba hisorohana ny plagiarism sy ny fahadisoana ara-pitsarana ao amin'ny lahatsorany. Raha efa nandrakitra ny asa soratranao ianao, dia tokony ho azonao antoka fa manoratra lahatsoratra tsy manan-danja izy ireo ary tsy misy hadisoana ara-pitsipi-pitenenana na sorabaventy. Plus, ny Anglisy dia tokony ho eo amin'ny marika raha toa ka ny mpihaino iraisam-pirenena no tanjonao. Ny fanoroana tsotra dia voarara tanteraka amin'ny Google sy ny fitaovam-pikarohana hafa. Noho izany, tokony ho azonao antoka fa manome zavatra tsara sy mahasoa ho an'ny mpihaino ianao. Miezaha hampiditra azy ireo amin'ny votoatiny informatika ary aza misalasala manadino ny asanao.
Tsy misy tsara kokoa noho ny fananana vohikala manana votoatim-pahalalàna sy karazana fikarohana tsara indrindra. Fa noho izany dia tokony hiasa mafy ianao ary handinika bebe kokoa ny kalitao anatiny sy ny teknolojia SEO anao. Na dia mihazakazaka raharaham-barotra na orinasa vaovao aza ianao, tsy tokony handika lalam-peo na oviana na oviana ianao ary tsy tafiditra ao anatinà sata mainty SEO Source .